I-Classic Cottage yaseSweden kwindawo entle
Ulricehamn SV, Västra Götalands län, Sweden
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPär
Yonwabela ukuthula kunye nobomi obucothayo emaphandleni kwiTorp yethu yesiko kodwa yalungiswa ngononophelo ukusukela kwi1800's. Kwiindawo ezingqongileyo ezintle uya kuhlala ungaphazamiseki kwi-idyll ezolileyo enendalo emangalisayo.
Indawo ibonelela ngeendawo ezininzi zokuhlambela, iimarike zentakumba, iikhefi, izinto ezinomtsalane kunye nemisebenzi. Sidwelise ngaphezu kwama-40 abantu abazithandayo kwincwadi yethu yesiKhokelo.
Le ndlu ikwimizuzu engama-20 ukusuka eBorås nase-Ulricehamn, imizuzu engama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemizuzu engama-60 ukusuka eGothenburg.
Wamkelekile kwi-Eivors stuga!
Umgangatho osezantsi unepaseji, ikhitshi elinendawo yokuphumla kunye negumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yomlilo. Ukusuka apha unokufikelela kwigadi kunye neepatios zayo ezininzi. Izinyuko zikukhokelela kumagumbi okulala amathathu (160 + 90 + 90 ibhedi), indawo yokugcina kunye negumbi lokuhlambela elinesitya kunye neshawari. Kukho indawo eninzi yeebhedi ezongezelelweyo okanye oomatrasi. Qaphela ukuba oku kuziswe lundwendwe ngokwalo. Egadini kukho iindawo zokuhlala ezahlukeneyo, izoso, indawo yokudlala, iijingi kunye nendlu yomthi. Kukwalapha ufumana indlu yangasese - "utedasset" - enezihlalo ezimbini ngokwesiko.
Indawo ezolileyo kakhulu. Intsapho ekwifama yamahashe ngummelwane kuphela esimbonayo kwi-cottage. Nangona kunjalo, abanakusibona. Kwezinye izindlu ezisecaleni kwendlela yegrabile abantu bahlala unyaka wonke, ngelixa ezinye zisetyenziswa njengezindlu zasehlotyeni. Uninzi lwabantu abahlala apha badala, kwaye bayakonwabela uxolo, ukuzola kunye nendalo - njengathi!